Nhau - Nyundo yemagetsi simbi yemhando yemagetsi inotenderera sando yekuboora ine chengetedzo batira yakasungirirwa ne pneumatic hammering michina.
Kumonyanisa Brill Bits
Kumonyanisa chibooreso ndicho chinonyanya kushandiswa gomba kugadzira chishandiso. Kazhinji, iyo dhayamita iri pakati pe0.25 mm kusvika 80 mm. The zononoka angled kuti monyorora chibooreso kunonyanya kukanganisa kukura achicheka unopinza rake angled, chipande simba uye Chip kubviswa waivako, izvo kazhinji pakati 25 ° uye 32 °.
1. Kazhinji, chibooreso cheblack chinoshandiswa kuchera simbi, uye iyo yekuboora bit isimbi-inomhanyisa simbi. Kuchera pane zvakajairika simbi zvinhu (chiwanikwa simbi, isiri-chiwanikwa simbi, simbi yakakanda, simbi yakakandwa, isiri-ferrous simbi) inoshandiswa pamwe chete nesimbi yekugedza. Nekudaro, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa pakuchera pazvinhu zvesimbi, uye kumhanya kwekutenderera hakufanirwe kuve kwakanyanya, uko kunogona kupisa nyore kumucheto kwechibhorani.
Ikozvino pane imwe goridhe yakaputirwa neisingawanzo yakaoma simbi firimu, iyo inogadzirwa nesimbi simbi uye zvimwe zvinhu uye yakaomeswa nekupisa kurapwa. Iyo tipi inotsikwa pamakona akaenzana pamativi ese maviri uye yakadzoserwa zvishoma kumashure kuti iite unopinza. Iko hakuna simbi, simbi uye aruminiyamu yakaoma nekupisa kupisa. Aluminium iri nyore kunamatira kune chibooreso uye inoda kuzorwa nemvura ine sipo panguva yekuchera.
2. Kuchera mumakongiri ekongiri uye nematombo zvigadzirwa, iko kushandiswa kwekukanganisa kubaya, kusanganiswa neibwe kudhiraira, kucheka musoro zvinhu zvinowanzo simiwa carbide. Mhuri yakajairwa, usaboorera mumadziro esamende, shandisa zvakajairwa 10 mm kutaurwa kwemagetsi ruoko chibooreso.
3. Boora huni. Kana uchichera pazvinhu zvehuni, zvichisanganiswa nekushandisa huni, matanda ane huwandu hwakakura hwekucheka vhoriyamu, uye kuomarara kwemidziyo yekucheka hakudiwe kuve kwakakwirira. Iyo yekucheka chishandiso zvinhu zvakajairika yakakwira-inomhanya simbi. Iko kune chidiki chidiki pakati pechidimbu chebiti, uye iwo angled kumativi ese ari maviri akakurisa, kunyangwe asina kona. Yenzvimbo yakanaka yekugadzirisa. Muchokwadi, chibooreso chesimbi chinogona zvakare kuchera huni. Nekuti huni dziri nyore kupisa uye machipisi haasi nyore kubuda, zvakafanira kudzora kutenderera kumhanya uye kazhinji kubuda kuti ubvise machipisi.
4. Ceramic tile drill bit inoshandiswa kuboora maburi pane zvedongo tile uye girazi nehurefu hwakareba. Tungsten carbon alloy inoshandiswa sechinhu chekushandisa. Nekuda kwekuoma kwayo kwakanyanya uye kuomarara kwakashata, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune yakaderera-mhanyisa uye isina kukanganisa kushanda.
Iyo yekucheka chikamu cheyakagadzika chibooreso ifoshoro yakaumbwa, ine yakapusa chimiro uye yakaderera yekugadzira mutengo. Iyo yekucheka fluid inounzwa zviri nyore mugomba, asi iyo yekucheka uye chip yekubvisa kuita haina kunaka. Kune mhando mbiri dzechibatiso chibooreso: chakabatana uye chakaungana. Iyo yakasarudzika mhando inonyanya kushandiswa kuchera micropores ine dhayamita ye0.03-0.5mm. Iyo yakaungana flat flat drill blade inotsiviwa uye inogona kutonhodzwa mukati. Inonyanya kushandiswa kuchera maburi makuru ane dhayamita ye25-500 mm.
Yakadzika Hole Drill
Yakadzika mugomba chibooreso chinowanzo chishandiso chemakomba machining ane chiyero chegomba kudzika kusvika kuburi dhayamita yakakura kupfuura 6. Inowanzo shandiswa ndeyekuboora pfuti, BTA Yakadzika gomba chibooreso, jeti chibooreso, DF yakadzika gomba kuboora, nezvimwewo Trepanning drill inowanzo shandiswa mune yakadzika gomba kugadzira.
Iyo reamer ine mazino 3-4, uye kuomarara kwayo kuri nani pane kuya kwekukanganisa chibooreso. Inoshandiswa kuwedzera iro raivepo gomba uye kugadzirisa machining kurongeka uye kupedzisa.
Iyo yepakati chibooreso inoshandiswa kubaya iyo yepakati gomba re shaft workpiece. Iyo chaizvo inoumbwa nekumonyoroka chibooreso uye chivara chakatarisana nediki helix kona, saka inonziwo komputa yepakati chibooreso.
Kuvaka chibooreso izita rakajairika remagetsi sando yekuboora uye simende chibooreso. Inoshandiswa pakuvhura kongiri, madziro uye mamwe mabasa. Chitarisiko chakatwasuka chakabata mubato, uye musoro wacho wakasungwa nesimbi yekucheka musoro. Chipande hachina kuvhurika. Ndiyo chete mitsara.
Kune mhando mbiri dzekuveza huni. Imwe ndeye kuveza twist chibooreso. Imwe yacho yekuveza huni. Woodworking twist drill inowanzonzi kuboora huni, iine 3 spikes mumusoro uye tsono refu pakati. Mativi ese ari maviri akapfupika zvishoma nekucheka. Chipanga chine kuvhura. Musoro wekuveza huni hwakadzika hwakati sandara. Pane kaburi kadiki pakati. Pamusoro pane tsono senge. Iko hakuna cheka yekucheka. (kutaura zvazviri, banga iri kumicheto miviri yemusoro wakatsetseka, riine yakavhurika yakaita yakavhurwa.) Kune marudzi maviri emashanga, akajairwa uye akaenzana.
Yekumhanyisa simbi simbi yekuboora yakakamurwa kuita yakananga shank twist drill uye taper shank drill. Yakaenzana shank drill.